Hoyga | Degmada Dugsiga ee Lancaster
Dhammaan kiisaska la xaqiijiyay ee COVID-19 ee dugsiyada SDoL waxaa lagu taxay shaashadda dadweynaha. Guji xiriirka hoose si aad u daawato.
Degmada Dugsiga ee Lancaster
Soo ogow SDoL
Amniga & Dhaqanka
Isbadal samee! Degmada Dugsiga ee Lancaster waxay raadineysaa xirfadlayaal karti leh, oo ka go'an inay ku biiraan kooxdeena. Furitaan deg-deg ah oo ku saabsan hoggaanka, macallimiinta iyo shaqaalaha taageerada!
Akadamiyada Wadada Cyber
Kusoo dhawow Fasalka McCaskey ee 2034! Dhammaan carruurta jira 5 sano kahor ama kahor Sebtember 1, 2021 oo dagan Lancaster City ama Lancaster Township waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan xanaanada sanad dugsiyeedka 2021-2022.
Codsiga Kahor Xannaanada
furan ee hadda
Xaqa Inla Ogaado
Waxaan u joognaa inaan caawinno. SDoL waxay leedahay isku duwaha waqti-buuxa ah ee walwalka waalidka si uu kaaga caawiyo adiga iyo qoyskaaguba inaad udhaxeysaan caqabadaha iyo helida jawaabaha. Walwal ma qabtaa? Guji hoosta si aad noogu soo sheegto.
Soo Gudbi Tabasho
Waxaan ognahay barashada iyo barashadu inay u muuqdaan kuwo ka duwan sanadkan Dugsiga Degmada Lancaster. Waa qeyb ka mid ah ballanqaadkeena caafimaadka iyo daryeelka ardaydeena iyo shaqaalaheena. Waxaan soo saarnay qayb ka mid ah degelkeenna internet oo tilmaamaysa qaababkeenna waxbarista, hab-maamuuska caafimaadka iyo hababka nadaafadda ee kor loo qaaday. Guji xiriirka hoose si aad waxbadan uga barato.
Si Ammaan ah SDoL
Ardaydeenu way guuleystaan ​​markay qoysasku barwaaqoobaan. U hel ilaha waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah mawduucyo ay ka mid yihiin xaadiritaanka, la-talinta, kuleejka / diyaarinta xirfadda, caafimaadka maskaxda iyo daryeelka caafimaadka.
Dugsiyadeenu waa tiirarka udub dhexaadka bulsho weynta. Baro wax badan oo ku saabsan fursadaha iskaashi ee ururada bulshada iyo siyaabaha shaqsiyaadka iyo kooxaha ay tabaruce ugu taageeri karaan ardaydeena.
Waxbadan Soo Kordhi
Waxaan ku faraxsanahay inaan noqono mas'uuliyiin mas'uul ka ah ilaha bulshada. Wax ka baro mudnaanta miisaaniyadda degmadeena, maalgashiga xarumaha, canshuuraha guryaha iyo fursadaha isboonsar.
ALUMNI & SAAXIIB
Baro wax badan oo ku saabsan Ururka Qalinjabiyeyaasha McCaskey, oo ka mid ah kooxaha ka qalin jabiya dugsiga sare ee Maraykanka, iyo Hay'adda Waxbarashada ee Lancaster, oo taageerta heer sare ee barista iyo guusha ardayda ee SDoL.
SDoL Ayaa Loogu Magacdaray Beesha Ugu Fiican Waxbarashada Muusigga
In ka badan toban sano, Degmada Dugsiga ee Lancaster waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee waxbarashada muusikada. Hay'adda NAMM Foundation waxay u magacawday Degmada Dugsiga ee Lancaster liistadeeda 2021 ee Bulshooyinka ugu Fiican Waxbarashada Muusigga si ay uga go'an tahay waxbarashada muusikada. SDoL waa mid ka mid ah 686 degmo dugsiyeed ee dalka oo dhan […]
Qaado sahankeenna ku saabsan xulashooyinka waxbarasho ee Dayrta 2021
Degmada Dugsiga ee Lancaster waxay qiimeyneysaa moodooyinka waxbarid ee loo fidiyay ardaydeena sanadkii la soo dhaafay iyadoo tixgelinaysa xulashooyinka sanad dugsiyeedka 2021-2022. Fadlan kaqeybqaado sahankan kooban adoo wadaagaya dookhaaga Fadlan ogow: Jawaabaha ka soo baxa sahankan ayaan waalidiinta ama degmadaba u oggolaanayn ikhtiyaarrada sannad-dugsiyeedka soo socda.
Maanta waa Maalinta Semi-Colon-ka Adduunka! Waxaan u dabaaldegeynaa noloshii dadkii ka badbaaday ismiidaaminta ee doortay INAYnan dhammayn noloshooda maxaa yeelay sheekooyinkoodu weli ma dhammaan Xusuusnow, inaadan waligaa keligaa aheyn!
Jawaab ku soo qor 1383070422590238723 Retweet on 1383070422590238723 2 Sida bogga 1383070422590238723 4
Faallooyinka Box SVG calaamadahaWaxaa loo adeegsaday waxyaabaha la mid ah, wadaag, faallooyinka, iyo astaamaha falcelinta
The Xarunta Dugsiga Sare ee McCaskey ardaydu waxay kaqeybqaateen Tartanka Warbaahinta-badan ee Multi-Madeed iyo Naqshadeynta oo ay soo qabanqaabisay IU13 sannadkan. Ardaydeenu waxay kaalinta koowaad iyo saddexaad ka galeen Nakhshadeynta 3D, marka hore Animation, anaguna waxaan qaadanay dhammaan seddexda meelood ee ugu sarreysa Barnaamijyada. Nasiib wacan kuwa kaalinta koowaad ku dhammeeya ee u qalma inay u gudbaan tartanka gobolka bisha Maajo! ... Arag in dheeraad ahEeg Khariidad
Raac Us on Facebook
PSSA: Fasalada 3-8 ELA
Shirka Gudiga Magacaabista Iskuulka
Guddiga Shirka oo Dhan
Kalfadhiga Labaad ee Macluumaadka Isqorista
Shirka Guddiga Siyaasadda
Ciidul Fitriga Oo Bilaabantay
Xil ka qaadis Hore - Secondary + MAR
Xil ka qaadis Hore
Xil ka qaadistii Hore - Dugsiga Hoose
Shirka Washington PAC - AM
Kulankii Washington PAC - PM
Xarunta Virtual Campus PAC
Daaqada Imtixaanka Keystone
251 Wadada South Prince
WaalidVUE / StudentVUE
Waraaqaha & Foomamka
2021, Degmada Dugsiga ee Lancaster
Foomamka & Dukumintiyada